Nkọwapụta 1.Speepe mkpuchi pụrụ iche na-eme ka egbugbere ọnụ dị elu. Dị ka mkpa ndị ahịa si dị, e nwere ike ịmasị ịnwụ iji nweta ihe nkiri N, na-echekwa tim 2.
Na ọwa pụrụ iche nke fishtail Ọdịdị, Iche iche mmanụ okpomọkụ-ịchịkwa usoro; Mkpụrụ aka dị elu na nke dị ala na -eche ederede dị iche iche. Techincal oke nwụrụ anwụ bụ 300 mm, Board obosara bụ 600 mm, ọkpụrụkpụ bụ 20-120mm. Die n'obosara bụ 450 mm, Board obosara bụ 900 mm, ọkpụrụkpụ bụ 20-120mm. Die n'obosara bụ 600 mm, Board obosara bụ 1200 mm, ọkpụrụkpụ bụ 20-80mm
Elu egbugbere ọnụ nke elu nwere ike ime ka ọ dị mma-mezie Ogwe mgbochi mmachi 45, obere egbugbere ọnụ nwere ike ịgbanwe. Ọ nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche, ọkpụrụkpụ dị iche iche nke ngwaahịa ahụ .Odabara ọkpụrụkpụ dị n'etiti 1-10mm, obosara nke ngwaahịa ahụ dị n'okpuru 10000mm. Techincal oke Ngwa: ịkwanyere, Pee, Eva, wdg Product ngwa: Tumadi maka ngwaahịa ụlọ ọrụ na-ewu, okpuru ulo, esite, na dam, n'okporo ụzọ ọwara, ndo, ọka ebusa, na-esi isi, mmiri mmiri ọgwụgwọ na ụlọ waterproof ...
Na pụrụ iche coathanger ọwa imewe, 90 ogo chock mmanya na elu-anwụ anwụ egbugbere ọnụ, ala-anwụ anwụ egbugbere ọnụ nwere ike ịgbanwe na-adjusts ọkpụrụkpụ si 2-30mm. Techincal oke ngwaahịa Obosara ： N'okpuru 3000 mm. Ngwa: Kpuchie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ polymer niile dịka PP, PE, PC, PMMA, EVA, ABS, PS, PA, PVC, wdg. Ngwa ngwa ngwa: A na-ejikarị ya na ngwa eletriki, ụlọ, ụlọ ọrụ kemịkal, igbe ọkụ, mma mgbasa ozi, wdg.
Ngwa ngwa ngwa ngbanwe ihu ngwa ngwa: ¢ 30-500MM Singer - --dị ụdị duplex na-arụ ọrụ ọnọdụ ngwa ngwa ngbanwe ihu igwe ugboro abụọ - Platedị ụdị ụdị quadruple na-arụ ọrụ ọnọdụ ngwa ngwa ngbanwe ihu ọhụụ Oke 1.Flow ọwa na-enweghị njigide plastik, obere oge obibi. 2.Processing okpomọkụ-achịkwa ka ubi leakproof ukpụhọde na ọnụọgụ nke uche expansio ...
PVCWPV ụfụfụ Board Die
Na pụrụ iche Coat-hanga ọwa imewe, elu ịnwụ egbugbere ọnụ nwere ike ịgbanwe ngwaahịa ọkpụrụkpụ, onye nke ala-anwụ egbugbere ọnụ na 90 ogo restrictor mmanya, izute dị iche iche ngwaahịa thick.The New imewe, elu na ala anwụ egbugbere ọnụ a dum, na-enweghị ihe mgbochi mmanya . Techincal oke 1.Product ọkpụrụkpụ: 3-25 MM 2.Special anwụ egbugbere ọnụ adabara dị iche iche ihe nke ụfụfụ ngwaahịa. 3.Special anwụ egbugbere ọnụ okpomọkụ akara ngwaọrụ, hụ na mejupụtara mmepụta chọrọ nke dị iche iche-asụ ingfụfụ ruru p ...
Na pụrụ iche uwe-nkwuba ọwa imewe, Oke anwụ anwụ egbugbere ọnụ na 90 ogo restrictor mmanya na-edozi ndị ọkpụrụkpụ, ala-anwụ anwụ egbugbere ọnụ bụ mwekota. Enwere ike ịbelata nkwụsịtụ iyi ọkụ nke na-ekpo ọkụ na usoro extrusion.
Pụrụ iche uwe-hanga ọwa imewe,, na 90 ogo restrictor mmanya ， otu nke elu na ala egbugbere ọnụ ,. Die egbugbere ọnụ iji pụrụ iche nha nha imewe ka ihu ọma nzukọ ahịa si requment .Thickness bụ 2mm, Ma ọ bụ dị ka ndị ahịa requment. Techincal oke 1.Product Na: N'okpuru 3000 mm. 2.Die egbugbere ọnụ nwere ike ịgbanwe, Dị ka ndị ahịa chọrọ nwere ike e mere abụọ dentate.